FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ESPANIÔLA AMERIKANA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Espaniôla amerikana
'Ity i Charlie. Izy dia 4 amin'ny sary teraka 27 Jolay 2014 tao Fenton fall, Ontario ary miaina am-pifaliana miaraka amin'ny fianakaviany any Toronto Ontario. Tian'i Charlie ny maka sy milalao ny zandriny lahy vao teraka. Mamy tokoa izy ary feno fitiavana. '
fampahalalana momba ny alika dane mahafinaritra
Ny Cocker Spaniel dia alika antonony sy matanjaka. Ny lohany dia boribory miaraka amin'ny fijanonana voatonona. Ny sakamaso dia malalaka sy lalina misy toradroa, eny fa ny valanoranony. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Maizina ny volomaso, boribory somary boribory somary mavo amandy. Merle Cocker Spaniels dia afaka manana maso manga . Ny sofina lava sy ambany dia volo tsara. Somary misolampy ny topline avy eo alohan'ilay alika ka hatrany aoriana ary mahitsy ny tongotra. Voapetaka ny rambony. Naoty: tsy ara-dalàna ny rambon'ny docking amin'ny ankamaroan'ny faritra eropeana. Azo esorina ny lalàm-panala. Ny palitao vita amin'ny silky dia fisaka na somary mikotrana. Ny volo dia lava halavan'ny vatana fa fohy sy tsara eo an-doha. Misy volom-borona amin'ny sofina, tratra, kibo ary tongotra. Ny palitao dia misy loko matevina, mainty misy teboka tan, merle, loko matevina misy teboka tan ary parti-loko. Ohatra amin'ny fitambaran'ny loko parti dia fotsy misy buff na mena, fotsy misy mainty, na fotsy misy teboka mainty sy mainty. Ny akanjo eny an-tsaha dia manana palitao fohy kokoa noho ny tsipika fampisehoana.
Sahy sy mazoto miasa, ny American Cocker Spaniel dia mitovy amin'ny fiainana amin'ny maha gundog na biby an-trano. Faly, malefaka ary mamy, ity karazana ity dia manan-tsaina antonony ary manaja ny fahefan'ny tompony. Mampihomehy, mendri-pitokisana ary manintona miaraka amin'ny rambony mihetsiketsika foana, mavitrika, milalao ary be fandavan-tena, saingy tokony mifanerasera tsara rehefa tanora dia misoroka ny fironana ho saro-kenatra. Ny akoho izay mahatakatra ny toerany dia eo ambanin'ny olombelona dia tsara amin'ny ankizy. Tian'izy ireo ny rehetra ary mila fitarihana mafy orina sy feno fitiavana ary fanatanjahan-tena isan'andro mba hahasambatra. Afaka ny ho izy ireo sarotra vaky trano . Ny ankamaroany mora hampiofana ary mifanerasera tsara amin'ny biby hafa. Aza avela hivoatra ity alika ity Syndrome kely alika , fitondran-tena ateraky ny olombelona izay inoan'ny alika fa izy dia mpitarika ho an'ny olombelona rehetra. Izany dia mety hiteraka ambaratonga isan-karazany amin'ny olana eo amin'ny fitondran-tena ary eo no mahadiso ny tompona maro. Ny tanjona amin'ny alika rehetra dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa eo ambanin'ny tsipika mpitondra tokana ary voafaritra mazava tsara ary apetraka ny lalàna. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny tompona mamela ny alikany hino fa avo kokoa amin'ny filaminana sy / na izay tsy manome fanazaran-tena ara-tsaina sy ara-batana isan'andro hiaina toetra hafa tanteraka noho ilay voalaza etsy ambony. Ny alika dia mety hampivelatra henatra, izay fitambaran'ny tahotra sy ny fanapahana izay mety hiteraka habibiana. Uriny manintona mazàna dia vokatry ny fientanentanana tafahoatra, ny tsy fisian'ny fampihetseham-batana ara-tsaina sy ara-batana isan'andro, izay ihakiviana ary tsy omena fotoana hampilamina isan'andro ny sainy. Masiaka koa fiambenana zavatra , ny olona sy ny toerana, ny fanjanahana mibontsina, hyperactivity ary mandehandeha, ankoatry ny hafa fihetsika ratsy . Misy karazany roa, tsipika an-tsaha ary tsipika fampisehoana. Ny tsipika an-tsaha dia namboarina mba hiasa ary manana natiora fihazana tsara kokoa sy palitao fohy kokoa, izay azo ampiharina kokoa amin'ny fiasana any anaty ala. Samy manao biby fiompy tsara ireo karazany roa ireo rehefa mahafeno ny filan'izy ireo toy ny biby kaninina ny tompony.
Haavony: Lehilahy 15 ½ santimetatra (38 cm) Vavy 14 ½ santimetatra (36.8 cm)
Lanja: 15 - 30 pounds (7 - 14 kg)
Ny olana lehibe sasany amin'ny Espaniôla Cocker Espaniôla dia ny katarakta, glaucoma ary ny luxe patellar. Ny olana kely sasany dia ny dysplasia amin'ny valahana, ny ectropion, ny entropion, ny PRA, ny allergy, maso serizy , seborrhea, lip lip pyoderma, otitis externa, aretin'aty, urolithiasis, firoboroboan'ny fihary nictitans, CHF, tsy fahampian'ny phosphofructokinase ary ny cardiomyopathy. Indraindray hita ny torsion amin'ny vavony sy ny dysplasia amin'ny kiho. IMHA (Anemia Hemolytic Mediated Immune). Raha ny filazan'ny tompona vitsivitsy:
'Ny Cocker anay dia tsy mba nanana andro marary teo amin'ny fiainany raha tsy tonga malemy tampoka izy ary nivoa-dra. Enina andro taty aoriana ary 3000 $ amin'ny faktiora amin'ny dokotera dia maty izy. Fantatro fa tsy afaka mitanisa ny aretina rehetra ianao noho ny fetran'ny habakabaka, fa ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana anatiny izay nitsabo ny alikay dia nilaza fa ny IMHA dia mahazatra any Cockers, ary saika mahafaty foana. Mamono olona haingana, mangina. '
Notaterin'ny tompon'ny Cocker Spaniel —Ny alikako Spaniel amerikana zanako amerikana dia maty tamin'ny 9/26/2011 tao IMHA. Nahazo fanefitra tamin'ny 9/20 izy ary naneho famantarana voalohany ny olana iray tamin'ny 9/22. 6 1/2 taona izy salama tsara. Alefaso azafady fa ny tompon'ny Cockers Amerikanina dia mila mahatsapa tsara an'io aretina io sy ny mety hisian'ny alikany voan'izany. Tokony hanao fitsapana ra foana izy ireo alohan'ny fanaovam-baksiny ary amin'ny famantarana ny olana aorian'izay dia tokony hitady fitsaboana avy hatrany amin'ny mpitsabo biby. Tsy nahalala na inona na inona momba ny aretina izahay ary tsy natoron'ny mpitsabo biby mihitsy ny mety hitranga amin'ity karazany ity. Hatramin'izay dia fantatsika fa mahazatra izany ary mila tadiavina amin'ity alika kely sy antitra ity. Mila manao izay hahazoana antoka fa fantatry ny tompony izany sy ny mety ho fifandraisan'ny vaksiny. Te hanampy amin'ny famoahana ny teny fotsiny aho. '
'Ny alikako dia maty noho io aretina io (IMHA). 7 1/2 taona izy. Tsy naneho mariky ny aretina izy raha tsy roa andro talohan'ny nahafatesany. Miasa haingana ny aretina. Amin'ny marika voalohany aharary dia mila entina any amin'ny mpitsabo biby ny biby fiompy ary mety mila fampidiran-dra. Nanapa-kevitra ny mpitsabo anay fa hiandry ary hijery nony maraina, tamin'izay fotoana izay efa tara loatra. Ity aretina ity dia tsy avy amin'ny vaksinin'ny alika foana fa tsy noho ny tifitra nandritra ny roa volana. '
Tsy maninona ny akoho ao anaty trano iray raha toa ka zatra miasa tsara izy ireo. Mavitrika ao an-trano izy ireo. Tokotany kely dia ampy. Tsy mifanaraka amin'ny hipetrahan'ny irery irery ao anaty tranon-kenna.
Ny Amerikanina Cockers dia manana tanjaka ary mila manao fanatanjahan-tena tsy tapaka. Tokony horaisina izy ireo mandeha isan'andro, mandeha lavitra . Rehefa mandeha dia sorohy ny kirihitra boribory izay mety hikorontana ny palitao. Aza hadino ny manana ny alika mandohalika na eo ivohon'ny olona mitazona ny fitarihana, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary izany mpitarika izany dia mila ny olombelona fa tsy ny alika.
Alika kely 1 - 7, 5 eo ho eo
Sasao ao ambanin'ny masonao matetika rehefa rovitra. Ny tompona sasany dia aleony mamela lava ny palitao, miborosy isan'andro ary manasa shampooing matetika amin'ny hety telovolana sy fikapohana. Ny sasany kosa aleony mametaka ny palitao amin'ny halavany antonony mba hiasa kokoa. Na izany na tsy izany, ny alika dia mila fanamafisana tsy tapaka. Rehefa miborosy dia tandremo sao esorina ny volo miraviravy. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Cocker Spaniel dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-14. Ny karazany dia avy amin'ny Espaniôla Cocker anglisy izay nentina tany Etazonia. Ny Espaniôla dia nitombo tamin'ny habeny ary nomena ny anarana hoe American Cocker Spaniels, antsoina amin'ny fomba ofisialy hoe 'Cocker Spaniel' avy amin'ny AKC. Ny American Cocker Spaniel dia malaza kokoa noho ilay English Cocker Spaniel English tany am-boalohany, izay somary tsy mitovy amin'ny endriny, miaraka amin'ny muzzles lava kokoa sy vatana lehibe kokoa. Ny Cocker Spaniel dia alika mpihaza izay afaka miasa amin'ny toerana sarotra amin'ny tany mando sy maina. Tena tsara amin'ny fametahana sy famerenana lalao amin'ny vava malefaka. Mihaino tsara ny baiko izy ireo. Ny anarana 'Cocker' dia avy amin'ny woodcock, vorona lalao nahafantarana ny alika tamin'ny alikaola. Ny sasany amin'ireo talentan'ny American Cocker Spaniel dia mihaza, manara-dia, mamerina, mpiambina, mailaka ary fankatoavana mifaninana. Ny amerikana Cocker Spaniel dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny 1873.
CiCi the American Cocker Spaniel amin'ny faha-13 taonany
Hijery ohatra hafa momba ny American Cocker Spaniel
American Cocker Spaniel Sary 1
American Cocker Spaniel Sary 2
American Cocker Spaniel Sary 3
American Cocker Spaniel Sary 4
Alika Spaniel Cocker amerikana: sarivongana taloha
alika miteraka lbs 35 lbs
Jack terrier sy chihuahua mifangaro
pitbull amerikana mainty sy fotsy